विश्वमा नेपाल चिनाउन पर्यटन : सभामुख
काठमाडौं, १२ जेठ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको पहिचान विश्व जगतमा चिनाउन पर्यटन व्यवसाय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको पर्यटकीय स्रोत साधनका हिसाबले निकै धनी भएको भन्नुहुँदै सभामुख महराले नेपालको पर्यटन विकासका लागि स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण चाहिएको बताउनुभयो । अबदेखि नेपालमा स्थायी सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको भन्नुहुँदै उहाँले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि भूमिकामा कमी नहुनेमा जोड दिनुहुँदै सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन आवश्यक पर्ने कानूनहरु के छन् ? बाधक के छ ? राज्यले सहजीकरण गर्ने ठाउँ के हो ? सरोकारवाला भएको हिसाबले तपाईहरुले प्रश्न उठाउनुस्, सरकारलाई घच्घच्याउनुस्, प्र्रस्ताव अघि बढाउन सहयोग गर्नुस् । मेरो तर्फबाट पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन मैले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।’